थाई सिक्का को विशिष्टताको छैन overestimated गर्न सकिन्छ। विश्वभरिका संग्रहकर्ता धेरै हजारौं ठूलो पैसा तिर्न यो देश को केही दुर्लभ नमूना प्राप्त गर्न इच्छुक छन्। सिक्का थाईल्याण्ड तिनीहरूले राज्य को इतिहास को वाहक हो कि विशेष र स्थानीय समाजमा र सभ्यताहरू को गठन को प्रक्रिया मा ऐतिहासिक घटनाहरू देखेका।
शब्द "सिक्का" को मूल
"सिक्का" यो शब्द को मूल को विभिन्न संस्करण टिप्पण लायक छ। संसारमा त्यहाँ जो यो नाम एक विशेष देशमा र विभिन्न परिस्थितिमा प्रयोग हालिदिए थियो अनुसार धेरै दन्त्यकथा हो। त्यसैले, तिनीहरूलाई एक शब्द "सिक्का" जो भगवान बृहस्पति को पत्नीहरू एक लगाएका जूनो मनेटा, नाम उत्पत्ति। मन्दिर भुक्तानीको माध्यम minted थिए जो धेरै भवन, घेरिएको, रोमी साम्राज्यको उनको सम्मान मा erected। धेरै इतिहासकारहरूले पैसा आए पछि धातु सिक्का भनिन्छ गर्न भन्ने विश्वास गर्छन्।
थाई सिक्का विशेषताहरु
विभिन्न धातु र विभिन्न आकारहरू बनेको थाईल्याण्ड सिक्का को ऐतिहासिक प्रक्रियाको मार्गमा। उदाहरणका लागि, एक quadrangular सिक्का र छल्ले minted। साथै, यो अन्य अनियमित ज्यामितीय आकार प्रयोग भएको थियो। यसरी, थाई सिक्का 1937 मोडेल वर्ष एक सिधा घन्टी को फारम लिए। थाईल्याण्ड मा आज प्रयोग सिक्का पाँच संप्रदाय। यो 25 र 50, साथै 1,5र 10 THB satang। यो मौद्रिक प्रणाली 1897 मा राजा Chulalongkorn वैध थियो। एक स्नान एक सय satang हुन्छन्।
थाईल्याण्ड को एक अद्वितीय सिक्का
सिक्का थाईल्याण्ड यो अचम्मको देश को इतिहास बारे धेरै बताउन सक्छ। को अग्र तिनीहरूलाई कुनै पनि वर्तमान राजा Bhumibol Adulyadej (राम IX) को एक चित्रणमा छ। यो राजाले टाढा 1946 आफ्नो सिंहासनमा विराजमान कि, खैर हुनेछ। लगभग 70 वर्ष को लागि IE। यो अद्वितीय शासक धेरै भाषामा धाराप्रवाह छ र ज्याज उठाउँछ। राजाको सबै जीवन आफ्नै देश शासन विषय थियो। उहाँले सबै व्यक्तिगत संलग्नहरू र आवश्यकता बलिदान। तिनीहरूका राजा भनिन्छ थाई मान्छे गहिरो आदर र श्रद्धाको चिन्ह रूपमा "जादुई omnipotence।" को पाठ्यक्रम, राज्य को हरेक टाउको यो सम्मान प्रदान गरिएको छ, र पनि आफ्नो जीवनकालमा। सिक्का थाईल्याण्ड, जो को फोटो तल देख्न सकिन्छ, साँच्चै अद्वितीय टुक्रा छन्।
विभिन्न तस्बिरहरू थाई सिक्का पछाडि पक्षमा स्थित हुन सक्छ। त्यसैले, संप्रदाय एक नम्बर Garuda एक पोर्ट्रेट भोगे उल्टाउन। यो mythical प्राणी धेरै पखेटा chimera जस्तो देखिन्छ। साथै, यो एक चीललाई गरेको चुच्चो र नंग्रा र एक मानव मुर्कुट्टा र हतियार छ। पौराणिक कथा अनुसार, यो चरा साधारण मानिसहरूको रक्षक थियो र सर्पले Naga प्रतिरोध गर्न। पौराणिक कथाहरू अनुसार, Garuda परमेश्वर विष्णु सेवा गरे। पुरातन समयका यो चरा थाईल्याण्ड को monarchical परिवार र राज्य को राष्ट्रिय प्रतीक को प्रतीक हो।
सिक्का को उल्टो मा अन्य शाही डुङ्गा Supannahong केही चित्रण गरिएको छ। यो शब्द बाट अनुवाद गरिएको छ थाई भाषा अर्थ सुनको हंस। यो पौडी सुविधाहरु उत्सव र Solemn समारोह मा राजा को सहभागिता को लागि निर्माण गरेका थिए। यो पहिलो यस्तो घटना यो डुङ्गा बाहेक 52 डुङ्गाबाट उपस्थित थियो, बाटो द्वारा हुनेछ। तिनीहरूलाई प्रत्येक पछिल्लो एक ऐतिहासिक घटना लागि थाईल्याण्ड केही महत्त्वलाई जोड दिए। साथै, पछाडि सानो सिक्का थाईल्याण्ड छविको मन्दिर विभिन्न समावेश गर्दछ।
निष्कर्षमा, यो थाईल्याण्ड सिक्का को खरीद अनलाइन र नीलामी मा विभिन्न पसलहरुमा हुन सक्छ आज उल्लेख गर्नुपर्छ। आफ्नो मूल्य वर्ष र अनुहार मूल्य आधारमा फरक हुन्छ। उदाहरणका लागि, तपाईं केही पसलहरुमा वर्ष को 1957, 61 वा 63-औं मुद्दा मा प्रतिहरू पाउन सक्नुहुन्छ।
कसरी विपरित Bitcoins लागि rubles आदान प्रदान गर्न, र?
को क्रिमीआ को दृश्य नयाँ 100-रुबल बैंकनोट्स
के विनिमय दर निर्धारण गर्छ? डलर-रुबल विनिमय दर केले निर्धारण गर्छ?
कसरी WebMoney मा Yandex पैसा स्थानान्तरण गर्न
मुद्रा निवासी: रूसी कानून को अवधारणा
इस्टोनिया मा मुद्रा के हो?
भारतीय फिलिम: अक्षय कुमार। Filmography, अभिनेता को जीवनी, गीत क्लिप। अक्षय कुमार को पत्नी
Bakov Vadim, प्लास्टिक सर्जन: समीक्षा, फोटो कामहरू
Lagonaki। आकर्षण - चमत्कार
हृदय को नियम कस्तो छ?
उहाँले एक पुरुष रूसी लोक पोशाक के हो?
कालो currant वोदका को Tincture: घर मा नुस्खा
न्यायकर्तालाई उमेर 25 वर्ष प्राप्त गरेको छ जो रूसी संघ को एक नागरिक हुनुपर्छ। नियुक्ति र आवश्यकताहरु लागि प्रक्रिया
घर ATVs: लोक कला piggy बैंकहरू देखि
विशेष गरी खाना पकाउने व्यञ्जनहरु,: ग्रिल मा झिंगा
साउदी अरब को महिला परिवर्तनहरू छन्?